OLAC Record: Fonds Denise Bernot, birman, 1964, bande 024, face Aa
Title: Fonds Denise Bernot, birman, 1964, bande 024, face Aa
Abstract: A little Burmese girl recites the Burmese alphabet (three times). Then, she sings rhymes and folk songs popular in the 1960s, some called ''a nyein,'' sung duringapwè, or Burmese popular stage show.
Une petite fille birmane récite l'alphabet birman (trois fois), puis chante des comptines et des chants populaires des années 1960, appelés ''a gnein", chantés lors des danses, des pwè (spectacles) birmans.
ဗမာအမျိုးသမီးငယ်တဦးသည် မြန်မာအက္ခရာများကို သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုသည်။ ထို့နောက် သူမသည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်များတွင် ဇာတ်ပွဲ (သို့) ဗမာစင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲများတွင် အငြိမ့်သီချင်းများအဖြစ် လူသိများကျော်ကြားသော သီချင်းများကိုသီဆိုသည်၊၊
Alternative Title: Fonds Denise Bernot, Burmese, 1964, tape 024, side Aa
Description: Denise Bernot encourage une petite fille à réciter l'alphabet birman (trois fois). Puis, elle lui fait chanter des comptines et des chants populaires des années 1960, appelés des ''a gnein" en birman. Ce sont des danseuses qui les chantent pendant les spectacles birmanes, les pwè. Les titres de ces chansons sont Ma Beda, Maung Shwe Yo et Thabin nanme Ma Hninsi.
Denise Bernot invitesalittle Burmese girl to recite the Burmese alphabet (three times). Then, she makes her sing rhymes and folk songs popular in the 1960s, some called ''a nyein'' in Burmese. These songs are performed byafemale dancer duringapwè, or Burmese popular stage show. The songs titles are : Ma Beda, Maung Shwe Yo, Ma Hninsi.
ဒင်းနစ်ဘားနော့သည် ဗမာအမျိုးသမီးငယ်တဦးကို ဖိတ်ခေါ်၍ မြန်မာအက္ခရာများကို သုံးကြိမ် ရွတ်ဆိုစေသည်။ ထို့နောက် သူမသည် မိန်းကလေးငယ်ကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်များက ဗမာပြည်တွင်အငြိမ့်သီချင်းအဖြစ် ထင်ရှားကျော် ကြား၍ လူသိများခဲ့သော ကာရန်ညီသီချင်းများကို သီဆိုစေသည်။ ဗမာဝေါဟာရဖြင့် အငြိမ့်သီချင်းများဟု ခေါ်သည်။ ထိုသီချင်းများသည် ဇာတ်ပွဲ (သို့) ဗမာစင်တင်ဖျော်ဖြေပွဲများတွင် အမျိုးသမီးသဘင်သည်များက သီဆိုတင်ဆက် ကပြလေ့ရှိသော သီချင်းများဖြစ်သည်။ ထိုသီချင်းနာမည်များမှာ မဗေဒါ၊ မောင်ရွှေရိုး၊ သဘင်သည်မလေး မနှင်းဆီတို့ ဖြစ်သည်။
Identifier: Ancienne cote: crdo-BER_1964_BUR_024_Aa
Identifier (URI): https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-f04f96b6-580a-3626-b7a4-073a3e20d476
Is Format Of (URI): https://cocoon.huma-num.fr/data/bernot/private_bernot/masters/BER-1964-BUR-024-Aa.wav